မြီးကောင်ပေါက်များအကြားအတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်း (၂၀၁၈) - Your Brain On Porn
Yaniv Efrati, မာတေယူချ် Gola
ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်ပါ၏, စစ။ 1-11
keywords: အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, မြီးကောင်ပေါက်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, အထီးထီးနေခြင်း
ြဒပ်မဲ့သော | အပြည့်အဝစာသား | ကိုးကား | PDF ဖိုင် (330 KB)
ဒါက Two-လေ့လာမှုသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်များ၏ Non-လက်တွေ့လူဦးရေအကြားတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏ profile များကိုသတ်မှတ်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရှိသုတေသနအတွက်ကွက်လပ်ဖြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှု 1 (ခုနှစ်တွင်N = 1,182), ငါတို့ငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးမြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်အ CSB ၏ profile များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များတွင်အောက်ပါအစုအဝေး ၃ ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ရှောင်ကြဉ်သူများ၊ လိင်စိတ်ကူးယဉ်သူများနှင့် CSB ရှိလူတစ် ဦး ချင်း။ သင်တန်း ၂ တွင် \_ tN = 618), ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခွဲခြားပုံတူကူးယူနှင့် Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, ထိန်းချုပ်မှု locus, ပူးတွဲမှု orientations, အထီးကျန်, အသက်, ကျား, မ, လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (SES), နေထိုင်ရာအရည်အသွေး, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင် -related အတွက်ပြွတ်အကြားခြားနားချက်များဆန်းစစ်ခဲ့သည် အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ။
ကွဲပြားခြားနားသောပြွတ်သို့ခွဲခြားမြီးကောင်ပေါက်သိသိသာသာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, SES, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကွဲပြားပါတယ်။ အထူးသ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus, စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှု, သာ. ကြီးမြတ်အထီးကျန်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့်အခြားသောအုပ်စုများထက်ပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံမှု-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြားတွင် CSB နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကပိုပြီးသီးခြားချဉ်းကပ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ CSB ပတ်သက်. အသိပညာချဲ့ထွင်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူပြီးမှ, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကူညီပေးနေလက်လိုအပ်ပါတယ်မှာဆုံရှိပါသည်။ ငါဝေးလွန်းသွားပြီပြီလော ငါအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘာလုပ်နေလဲငါပါသလဲ? Deviant? မကြာခဏပျောက်ဆုံး feeling, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးတိုးပွားလာလိင်နှင့်လိင်နှင့် ပတ်သက်. လမ်းညွှန်မှုရှာကြာလော့။ သူတို့ရဲ့လိင်-related အတှေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အပြုအမူပုံမှန်ရှိမရှိအံ့သြသူတို့ Clinician နှင့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်များမှလှည့်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်များနှင့်ကြောက်စရာနှစ်ဦးစလုံးသောဤအသစ် uncharted နယ်မြေထဲမှာသူတို့ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုသို့မဟုတ်ဘေးဥပဒ်ကိုမှလမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ်ရှိမရှိသိရန်လိုကြသည်။
ရွယ်တူများနှင့်မီဒီယာမှမိမိတို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု, မြီးကောင်ပေါက်အဖြေကိုရှာကြာလော့။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က၏အကြံပေးချက်နှငျ့ ပတျသကျ. ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ၏ 11th ထုတ်ဝေနေတဲ့ရောဂါ (; 6C72 ခွဲခြားအရေအတွက်ကို CSBD) အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ပါဝင်သည်သိရသည်။ CSBD, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နဲ့ထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောအတွက်အဆက်မပြတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါဖြစ်ပါတယ်တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ, လူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်လည်ပတ်အတွက်ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းဖို့နဲ့အခြားဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ICD-11 မှဦးဆောင်; Gola & Potenza, 2018; Kafka, 2010; WHO က, 2018) ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, သို့သော်နေဆဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်နှင့်အထူးသ CSBD နှင့်အတူပိုလျှံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူပန်းချုပ်ကစားနည်းနေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတေသနသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အဘယ်အရာကိုအခြားတပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြားကြားတွင် CSB-related အပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုရှိပါတယ်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့မရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့အသိပညာ၌ဤကွာဟချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ပစ္စုပ္ပန် Two-လေ့လာမှုသုတေသနဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
တိုက်ပိတ် CSB နှင့်လူ့ CSB: တစ်ဦးချင်းစီ၏လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် CSB နှစ်ခု Subtype ဖော်ပြခဲ့တယ်။ တိုက်ပိတ် CSB ထိုကဲ့သို့သော (မကြာခဏ obsessive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအနေဖြင့်လိုက်ပါသွား) ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်အချိန်အများကြီးဖြုန်းအဖြစ်အပြုအမူတွေကိုရည်ညွှန်းသည်။ Interpersonal CSB ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ပူပြင်းတဲ့လိုက်စားအဖြစ်အပြုအမူတွေပါဝင်သည်။ တိုက်ပိတ် CSB လူ့ CSB ထက်အချို့သောလူဦးရေပိုမိုပျံ့နှံ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အဖြစ်ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းစီ-based အပြုအမူတွေ, (ချမှတ်ရန်ဘာသာရေးနှင့်ရှေးရိုးစွဲလူတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြMacInnis & Hodson, 2015; Lewczuk, Szmyd, Skorko, & Gola, 2017), လူ့သူတွေကိုထက်။ မြီးကောင်ပေါက်ပိုပြီးမကြာခဏလူကြီးများထက်ရင်းနှီးလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ထက် (ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဲ့သို့) တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံDelmonico & Griffin, 2010).
"ဒုတိယတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကို" အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, (Blos, 1979), ပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့, စရာတွေအဖြစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုနှင့်အရေးပါမှု၏အသစ်ပြင်ပအရာဝတ္ထုအဘို့အရှာဖွေရေးအပေါ်လျော့နည်းမှီခိုဖြစ်လာအဖြစ်လိုက်လျောညီထွေအဘို့ဤလိုအပ်ချက်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်နှင့်အတူလက်၌လက်တတ်၏။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, ဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုဖိအားနှစ်ခုစလုံး (လိင်နှင့်အတူအဆက်မပြတ်များစွာသောသဘောတူညီချက် dictateO'Sullivan & Thompson က, 2014), အန္တရာယ်ယူပြီး (Arnett, 1992), နှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျး။ ထိုသို့သောအပြုအမူတစ်ချိန်ချိန် (CSB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါde Crisce, 2013).
CSB ကိုသုတေသနတိုးချဲ့နေသော်လည်းလက်ရှိဗဟုသုတတွင်ကွာဟချက်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ CSB သည် monolithic (ဆိုလိုသည်မှာ CSB ၏ပရိုဖိုင်းတစ်ခုရှိသည်) သို့မဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံ (ဆိုလိုသည်မှာ CSB ၏ပရိုဖိုင်းများစွာရှိသည်) ဖြစ်ရပ်ဆန်းလားမရှင်းရသေးပါ။Gola, Miyakoshi, & Sescousse, 2015; Gola & Potenza, 2016) နှင့်ဒုတိယ, ငါတို့အချို့ CSB Subtype သတ်မှတ်နိုင်မလား။ ပိုကောင်းနှစ်ခုရှုထောင့်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိပါသည်။ (လက်ရှိစာပေအများစုမှာEfrati & Mikulincer, 2018; Gola et al ။ , 2017; Kaplan & Krueger, 2010; Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013; Kraus, Voon, & Potenza, 2016; Kühn & Gallinat၊ ၂၀၁၄; မတ်ေတာ, Laier, အမှတ်တံဆိပ်, Hatch, & Hajela, 2015; ရိဒ်, 2010; Reid, Garos, & လက်သမား, 2011) ရိုးရိုး CSB ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲကစားမှာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ချေသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ, အစီရင်ခံအကြိမ်ရေနှင့် CSB ၏ရလဒ်ကိုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖော်ပြနေချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, CSB နှင့်အတူလူတစ်ဦးထက်ပိုသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကွဲပြားခြားနား CSB profile များကိုများ၏ထောက်လှမ်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ပစ္စုပ္ပန်သုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB လက္ခဏာတွေပေါ်ဒေတာပေးခွငျးအားဖွငျ့နှင့်ဤအသက်အရွယ်အုပ်စု CSB ၏ profile များကိုအဆိုပြုနေဖြင့်လက်ရှိစာပေနှစ်ခုကွာဟချက်ကိုဖြည့် start ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၏ locus, Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ (extraversion, နှငျ့ညီညှတျ, အသိစိတ်, neuroticism နှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်ပွင့်လင်း): အပြင်, ပိုကောင်းသည်ဤပရိုဖိုင်းကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်ကျနော်တို့သုတေသန CSB-related အပြုအမူအပြင်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးသောအဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြတော်မူကြောင်းကိုအများအပြားအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစား ထိန်းချုပ်မှု (ပြည်တွင်းရေး, အစွမ်းထက်အခြားသူများနှင့်အခွင့်အလမ်း), ကို attachment စတိုင်များ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်), ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှု, လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (SES), ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကျား, မ။
အထူးသ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပူးတွဲမှုစတိုင်များဆယ်ကျော်သက် CSB ၏ကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုနားလည်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (ထိုငါး Factor မော်ဒယ်အညီခွဲခြားစေခြင်းငှါMcCrae & ကော့စ, 1994), အရာအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီ extraversion, နှငျ့ညီညှတျ, အသိစိတ်, neuroticism နှင့်အတွေ့အကြုံမှပွင့်လင်းပေါ်သွင်းယူသည်။ မကြာသေးမီကသုတေသနပြု (CSB နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူ CSB မပါဘဲလူကြီးများထက်နှငျ့ညီညှတျနှင့်အသိစိတ်အပေါ် neuroticism အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ဂိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ထားပါတယ်Zilberman, Yadid, Efrati, Neumark, & Rassovsky, 2018) ။ ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် CSB ၏ profile များကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အထူးသ neuroticism, နှငျ့ညီညှတျနှင့်အသိစိတ်နှင့်ဆက်စပ်သောမည် hypothesize ။
ဆယ်ကျော်သက် CSB ၏ကွဲပြားခြားနားသောပရိုဖိုင်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကို attachment စတိုင်များ (ဖြစ်ပါတယ်Bowlby, 1973, 1980, 1982) ။ attachment စတိုင်များ (တွေ့မြင်အထူးသဖြင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုကာလ၌, စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူရင်းနှီး interaction ကနေတဆင့်နို့စို့အရွယ်စဉ်အတွင်း shaped နေကြတယ် Mikulincer & Shaver, 2007 အသေးစိတ်အကောင့်များအတွက်) ။ စောင့်ရှောက်သူများကထောက်ပံ့မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုငှားရမ်းပြီးနှစ်သိမ့်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအခါ၊ မွေးကင်းစကလေးသည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့်အခြားသူများ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အမြင်ဖြင့်ပူးတွဲထားသည့်ကိန်းဂဏန်းအပေါ်လုံခြုံသောနှောင်ကြိုးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ချရတဲ့။ လုံခြုံသောလူများသည်လူမှုရေးပိုများပြီးမိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ရင်ခုန်စရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မိဘ၏ပံ့ပိုးမှုသည်မလုံလောက်သဖြင့်မလုံခြုံသောပူးတွဲမှုပုံစံများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤရွေ့ကားစတိုင်များပူးတွဲဖိုင်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းနှစ်ခုရှုထောင့်တစ်လျှောက်ခွဲခြားထားပါသည် (Brennan, Clark, & Shaver, 1998; Collins & Allard, 2004) ။ မွေးကင်းစ '' လိုအပ်ချက်များကိုလုံလုံလောက်လောက်စောင့်ရှောက်သူများနေဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြသည်မဟုတ်နှင့်ထောက်ခံမှုများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏ရရှိမှုမသေချာမရေရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, စွန့်ခွာကိုကြောက်ရွံ့ပယ်ချခံတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူတွဲပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစတိုင်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (စိုးရိမျတတွဲနှင့်ငြင်းပယ်ခံရ၏မြင့်မားသောကွောကျရှံ့သောအားဖြင့်နှောင့်နှေးကြောင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်များအတွက်မြင့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဟုခေါ်ကြသည်Smith က Murphy က & Coats, 1999) ။ ဤလူချစ်ခင်တစ်ခုညျ့စုံငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများမသက်ဆိုင်ချစ်ခင်၏ပမာဏ၏သူတို့အမှန်တကယ် (လက်ခံရရှိBirnbaum, Reis, Mikulincer, Gillath, & Orpaz, 2006) ။ လျစ်လျူရှု၏အတွေ့အကြုံတသမတ်တည်းအလုံအလောက်ထပ်ခါတလဲလဲလျှင်မွေးကင်းစယုံကြည်ထားသည်ဟုနှင့် undependable အဖြစ်အခြားသူများကိုရှုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုပူးတွဲမှုရှောင်ရှားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပူးတွဲမှုစတိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာတခြားသူတွေရဲ့ချစ်ကြည်ရေးယုံကြည်စိတ်ချဖို့မလေ့မည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး (မှမိမိတို့ဝေးကှာသှားဖို့ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်Smith et al ။ , 1999) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအရ, (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်) မလုံခြုံပူးတွဲမှုစတိုင်များပြသခြင်းမြီးကောင်ပေါက်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ attachment ပါများထက် CSB မြင့်မားရောဂါလက္ခဏာရှိနိုင်ပါသည်။ CSB နွေးထွေးမှု, စောင့်ရှောက်မှု, နှင့်ချစ်ခင်ဘို့လိုအပ်တယ်ရသောမလုံလောက်ခြင်းနှင့်မကျေနပ်ကြလူမှုရေးဆက်ဆံမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါယခင်သုတေသနများကထောက်ခံအဖြစ် (တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်Gilliland, အပြာရောင်စတား၊ Hansen, & လက်သမား, 2015; Zapf, Greiner, & ကာရိုး, 2008), လူကြီးများအကြားစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့် CSB ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်စပ်မှုထင်ရှားသည့်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအတွက် Efrati နှင့် Amichai-ဟမ်ဘာဂါ (2018) CSB မှပြောပြတယ်သောအရာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PU), ပြသပြီ, မလုံခြုံပူးတွဲမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
â€; လိင်-ဆက်စပ်အပြုအမူကိုလည်းတဦးတည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဘဝကိုကျော်ရှိသည်ရိပ် မိ. ထိန်းချုပ်မှုပမာဏ (ထိုâ€ထိန်းချုပ်မှုœlocusဒါခေါ်ဖို့ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါ Rotter, 1966) နှင့်အထီးကျန်၏ Persona €™ s ကိုအသိပေးရန်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus ဟာမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြPharr et al ။ , 2015), နှင့်အထီးကျန်လူကြီးများအကြားတွင် CSB ၏အဆင့်မြင့်ဖို့ပြောပြတယ် (Bőthe, Tóth-Király, et al ။ , 2018; Dhuffar, Pontes, & Griffiths, 2015; Yoder, Virden, & Amin, 2005) ။ ဥပမာ Yoder et al ။ (2005) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်တစ်နေ့လျှင်မိနစ်အရေအတွက်ပိုများလေ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအတွက်တစ်ပတ်လျှင်ရက်အရေအတွက်ပိုမိုများပြားလေအထီးကျန်ဆန်မှုပိုများကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ Bőthe, Tóth-Király, et al ။ (2018) လည်းနိမ့်အန္တရာယ်မှာ-အန္တရာယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် Non-ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထက်အထီးကျန်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ မှတ်စု၏, မြီးကောင်ပေါက်အကြားမှ PU အထီးကျန်များအတွက်လျော်ကြေးငွေအဖြစ်အစေခံရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအရ, အထီးကျန်ဆန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏ပြင်ပ locus ၏မြင့်မားကြုံနေရမြီးကောင်ပေါက်အထီးကျန်နိမ့်အဆင့်ဆင့်ကြုံတွေ့ရမြီးကောင်ပေါက်ထက် CSB ၏အဆင့်မြင့်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏ပြည်တွင်းရေး locus နိုင်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အကြားကွဲပြားခြားနားသော CSB profile များကိုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့, ငါတို့သည်လည်းလူကြီးများနှင့် / သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB ကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်အများအပြား sociodemographic အချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဥပမာအားဖြင့်, လူငယ်များအသက်အရွယ်အဖြစ်, သူတို့ကပိုပြည့်စုံရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး (ရှာအံ့သောငှါHerbenick et al ။ , 2010) ။ လိင် (သိချင်စိတ်နှင့်အတူစတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလိုသောမှနောက်ဆုံးမှာရွှေ့စေခြင်းငှါ,Ševčíková, Blinka, & Daneback, 2018) ။ Amichai-ဟမ်ဘာဂါနှင့် Efrati (ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာ) အွန်လိုင်းလိင်တက်ကြွအော့ဖ်လိုင်းနေသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အားလုံး (အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း) မှာလိင်တက်ကြွမဟုတ်သောသူတို့၏မှနှိုင်းယှဉ်လျှင် (14â€ "17 နှစ်) အဟောင်းတွေဖြစ်လေ့ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ, သူတို့လည်းလိင်တက်ကြွအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုမြီးကောင်ပေါက်မတက်ကြွခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုထက်ပိုမိုမြင့်မား SES ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားပိုမိုမြင့်မား CSB နှုန်းထားများလောကသူတွေနဲ့အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက (ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြားတွေ့ရှိရကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဥပမာ, Efrati, 2018a) နှင့်ယောက်ျားလေးများကြားတွင် (Efrati, 2018b) ။ မတူညီသော CSB profile များကိုရှာဖွေစူးစမ်းလာသောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်, SES, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကျား, မများ၏အလှူငွေဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနများ၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်, ငါတို့နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 1 ခုနှစ်, 1,182 အစ္စရေးမြီးကောင်ပေါက် CSB တစ်အတိုင်းအတာပြီးစီးခဲ့နှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသော CSB profile များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (LPA) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု2တှငျကြှနျုပျတို့လေ့လာ 1 ၏တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားဖို့နဲ့တစ်ဦးချင်းစီ CSB ပရိုဖိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စေလိုကြောင်း။
လေ့လာမှု 1 မြီးကောင်ပေါက်အကြားကွဲပြားခြားနားသော CSB profile များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
1,182 အစ္စရေးကျောင်းမှကျောင်းသားများ, 500 ယောက်ျားလေးများ (42.30%) ပါဝင်သည်ဟုနှင့် 682 မိန်းကလေးငယ် (57.70%) အသက်အဘယ်သူသည်14â€ "18 နှစ်ပေါင်း (စုစုပေါင်းM = 16.68, SD = 1.54), လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ သင်တန်းသားများကိုIsraelသရေလအမျိုး၏နေရာများ (တောင်ဘက်၊ အလယ်ဗဟိုနှင့်မြောက်ပိုင်းခရိုင်များ) ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျောင်း ၆ ကျောင်းမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏တန်းတူအရေအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးပမ်း, အဆင်ပြေနမူနာသုံးပြီးမေးခွန်းဖြန့်ဝေ။ ကျောင်းများတွင်ဝင်ရောက်ခင်မှာကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားများလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိခြင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသူအအတန်း9â€ "12 ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ညှိနှိုင်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးများစီစဉ်ခဲ့သည်။ ဤအအစည်းအဝေးများအောက်ပါကျနော်တို့လေ့လာသူတို့ကိုအသိပေး, သူတို့ကသူတို့childâ€™်ပါဝင်မှုကန့်ကွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အပိုဆောင်းစာတစ်စောင်မိဘများအက္ခရာများကိုစေလွှတ်။ , ကျောင်းသားများပြည့်စုံအမည်မဖော်ထားတဲ့ In-class ကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်အာမခံချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဟီဘရူးအတွက်မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ မေးခွန်းများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်လွယ်ကြ၏အတည်ပြုရန်, ငါတို့အထဲကအသံကျယ်မေးခွန်းလွှာတစ်ဦးထံမှပစ္စည်းကိုဖတ်ပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလိုအပ်အဖြစ်အကူအညီများပေးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျောင်းသားများကိုစိတ်ချပါ။ မေးခွန်းလွှာများပြီးစီးပြီးနောက်ကျောင်းသားများကို debriefed နှင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးချင်း-based compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ကျနော်-CSB; Efrati & Mikulincer, 2018)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာငါ-CSB (များ၏ဟီဘရူးဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Efrati & Mikulincer, 2018) ။ I-CSB သည်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ စွဲလမ်းမှုရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းအတွက်အချိန်များစွာဖြုန်းခြင်းကဲ့သို့သော CSB ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များကိုအကဲဖြတ်ရန်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ I-CSB သည်အောက်ပါအချက်များကိုတိုင်းတာရန်ပစ္စည်း ၂၄ ခုပါသောမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံသောမေးခွန်းလွှာဖြစ်သည်။ မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများကထိခိုက်သည်ဟုခံစားရသည်”)၊ ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း (ဥပမာ၊ My sexy fantasies”) ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (ဥပမာ၊ “ လိင်မှုကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ရန်မအောင်မြင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်”) နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ) ။ ၇ မှ Likert စကေးကို အသုံးပြု၍ ၁ (အထိ)အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (7 မှအများကြီး), သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သောဖို့ဒီဂရီဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းလွှာကိုအောင်မြင်စွာ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလိင်အပေါ်ယခင်သုတေသနအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်Efrati, 2018a, 2018b, 2018c) နှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် Non-လက်တွေ့လူဦးရေပေါ်မှာနှင့် Sexaholics အမည်မသိဆယျ့နှစျ-အဆင့်အစီအစဉ်ကိုလူနာလက်တွေ့လူဦးရေအပေါ် (Efrati & Gola, 2018; Efrati & Mikulincer, 2018) ။ တန်ဖိုးများ±Cronbachâ€™ s ကိုငါထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းသည်, မလိုချင်တဲ့အကျိုးဆက်များများအတွက် .86 .86 ခဲ့ကြသည်, အနုတ်လက္ခဏာများအတွက် .88 အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အဘို့အ .87 စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း 24 ငါ-CSB ပစ္စည်းများ (Cronbachâ€™ s ကိုငါ±â€‰ = €‰ .93 က) ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်း CSB ရမှတ်တွက်ချက်။
LPA မြီးကောင်ပေါက်အကြား hypersexual အပြုအမူများ၏ Subtype ဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ LPA ဟာငါ-CSB မေးခွန်းလွှာလေးအချက်များပါဝင်သည်နှင့်လေးစပျစ်သီးပြွတ်ခြွင်းချက်မရှိမော်ဒယ်များမှ one- စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ နှင့်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာ: အကောင်းဆုံး-သငျ့မော်ဒယ် [Bayesian သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်း (BIC) နှင့်နမူနာ-size ပြုပြင် BIC] နိမ့်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး, မြင့် entropy (0â€ "1 အကွာအဝေး) ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် p အဆိုပါ Loa € "Mendellâ€" Rubin ကစာမေးပွဲနှင့် Bootstrap ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအချိုးစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တန်ဖိုးများ။ LPAs Mplus 6.1 သုံးပြီးခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ မော်ဒယ်ညွှန်းကိန်းဇယားအတွက်တင်ပြကြသည် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ CSB များအတွက် one- မှလေးခု-စပျစ်သီးပြွတ် LPAs ဘို့နဲ့ Fit ညွှန်းကိန်း
Fit ညွှန်းကိန်း 1 စပျစ်သီးပြွတ်2ပြွတ်3ပြွတ်4ပြွတ်
လေ့လာမှု 1 BIC 16,483.11 14,890.69 14,385.15 7,558.86
LMR p အဘိုး <.0001 .0013 .14
BLRT p အဘိုး <.0001 <.0001 <.01
လေ့လာမှု2BIC 9,555.68 8,611.16 8,307.31 8,181.97
LMR p အဘိုး <.0001 .0035 .13
BLRT p အဘိုး <.0001 .0041 .02
မှတ်စု။ BIC: Bayesian သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်း; SABIC: နမူနာအရွယ်အစား-ချိန်ညှိ Bayesian သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်း; LMR: Loa € "Mendellâ€" Rubin ကစမ်းသပ်; BLRT: Bootstrap ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအချိုးစမ်းသပ်ခြင်း; CSB: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; LPA: ငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများ၏ဦးစီးချုပ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ Ethical ကော်မတီအားဖြင့်၎င်း, IDC မှ Herzliya ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ပုံစံများနှင့်မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်လေ့လာမှုကာလမတိုင်မီကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း 1ယင်းသုံးစပျစ်သီးပြွတ်ဖြေရှင်းချက်အကောင်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB အပြုအမူများသုံး profile များကို (ပုံဖော်ပြတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည် 1) ။ နမူနာ၏ 88% အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်: အထူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်နမူနာ 53.8% နှစ်ခု subclasses နှင့်အတူ Non-CSB ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား ရှောငျကွဉျ (n I-CSB မေးခွန်းလွှာ၏ subscales အားလုံးတွင်နိမ့်သောရမှတ်များပြသခဲ့ပြီး ၃၄.၂%၊n အဖြစ်နမူနာ၏ = 394) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်-related အနုတ်လက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအတွက်မြင့်မားသောရမှတ်များတင်ပြထိခိုက်စေခြင်း, အတှေးအနိမ်ရမှတ်မလိုချင်တဲ့အကျိုးဆက်များပေါ်နှင့်စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ တတိယအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ CSBs (နမူနာများ 12.0% ပါဝင်သောn = 142) အပေါင်းတို့နှင့်တကွလေး CSB အချက်များအတွက်မြင့်မားသောရမှတ်များပြသခဲ့သည်။
ပုံ 1 ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏အတန်း (လေ့လာမှု 1)
လေ့လာမှု 1 မြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB သုံးခုကွဲပြား profile များကိုထုတ်ဖော်ပြသ။ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုပုံတူပွားဤပရိုဖိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးလေ့လာမှု2ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
လေ့လာမှု2လေ့လာမှု 1 ၏တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်း 1 မှာတွေ့ရတဲ့ CSB-related profile များကိုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အစ္စရေးဆယ်ကျော်သက်ငါ-CSB, PU, ​​အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု, Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, အထီးကျန်ဆန်, ထိန်းချုပ် locus, ပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့် sociodemographic အစီအမံများ၏အစီအမံပြီးစီးခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကို 618 အစ္စရေးမြီးကောင်ပေါက် (341 ယောက်ျားလေးများနှင့် 277 မိန်းကလေးများ), အသက် 14-18 နှစ်ပေါင်း (ခဲ့ကြသည်M = 16.69, SD = 1.16), လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ ၄ င်းတို့၏ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြသော SES မှာ ၆% ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏အဆင့်သည်ပျမ်းမျှထက်နိမ့်သည်၊ ပျမ်းမျှ ၆၀.၈% နှင့်ပျမ်းမျှအထက် ၃၂.၇% ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ် ၅၃.၉% နှင့်လောကမှ ၄၆.၁% တို့ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုIsraelသရေလအမျိုး၏နေရာများ (တောင်ဘက်၊ အလယ်ဗဟိုနှင့်မြောက်ပိုင်းခရိုင်များ) ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျောင်း ၆ ကျောင်းမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း - - မေးခွန်း Qualtrics မှအပ်လုဒ်လုပ်ထားခံခဲ့ရခြင်းနှင့် 14-18 နှစ်ပေါင်းအသက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏မိဘများမှသုတေသနလက်ထောက်များကပေးပို့။ သုတေသနလက်ထောက်၏အသိအကျွမ်းခဲ့ကြသူမိဘများ, မတိုင်မီမြီးကောင်ပေါက်ကထွက်မပို့ဖို့မေးခွန်းလွှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်မိဘများအနေနဲ့အသိပေးမိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်အပျေါမှာ, အွန်လိုင်းစစ်တမ်းအဘို့ link တစ်ခုဟာမြီးကောင်ပေါက်စလှေတျခဲ့သညျ။ သူတို့အနေနဲ့အသိပေးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးနောက်သူတို့မေးခွန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအကြားကွဲပြားမေးခွန်း၏အမိန့် (Qualtrics တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်), နှင့်ကိုယ့်-CSB ပိုင်ထိုက်, PU, ​​အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု, Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, အထီးကျန်ဆန်, ထိန်းချုပ် locus, ပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့် sociodemographic အစီအမံ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အွန်လိုင်း debriefing ပေးထားခဲ့သည်။
PU ၏ frequency
သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း (1 စောင့်ကြည့်မေးမြန်းခဲ့ကြ - ဘယ်တော့မှ,2- တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်လ,3- တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်နှင့်4- တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်နေ့က);2နှင့်အဆင့်မြင့်၏ရမှတ်များနှင့်အတူသူတို့အတိတ်လအတွင်းမှာမှ PU သုံးစွဲတစ်ပတ်ကိုမိနစ်ပျမ်းမျှအရေအတွက်အားပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ကနေအဆင်ပြေအောင်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို ( Ševčíková, Vazsonyi, Širůček, & Konečný, 2013မ0- -) လေး dichotomous ပစ္စည်းများ (1 ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်အတိတ်တစ်လအတွက်သူတို့ခဲ့ရှိမရှိမြီးကောင်ပေါက်တောင်းဆိုနေတာဟုတ်ကဲ့):, (က) ကိုနမ်း (ခ) တစ်စုံတစ်ဦး၏ရင်းနှီးသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို petted သို့မဟုတ် caressed, (ဂ) ပါးစပ်လိင်ခဲ့ , သို့မဟုတ် (ဃ) လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သညျ။ အားလုံးအချက်တွေကိုများအတွက်ရမှတ်ကွန်ပျူတာပြီးနောက်ဤအပြုအမူမဆိုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တဲ့မြီးကောင်ပေါက် 1 coded ခဲ့ကြသည်ဘူးသောသူတို့အားသော်လည်း,0coded ခဲ့ကြသည်။ အတိုင်းအရှည် Efrati နှင့် Amichai-ဟမ်ဘာဂါ (အားဖြင့်ဟီဘရူးမှဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်2018).
လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု (SROA; Sěvcíková et al ။ , 2013)
ဖြေကြားသူများအား၎င်းတို့သည်အောက်ပါအပြုအမူ (၉) ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါသလားဟုမေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် - သူတို့နှင့်သိကျွမ်းသူတစ်စုံတစ်ယောက်အားလိင်အကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိင်အကြောင်းသူတို့မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်အားပြောပြခြင်း၊ သူတို့အား၊ သူတို့မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူသူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်၊ ထိုသူအားတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုသူတို့နှင့်သိကျွမ်းသည်၊ တစ်ယောက်ယောက်နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုသူတို့မသိသောသူနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှဓါတ်ပုံများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်၊ ဆိုက်ဘာဆက်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်ကို (ဥပမာ“ ဟုတ်သည်” အဖြေများ) ရေတွက်ခဲ့သည်။ ရမှတ်များသည်သုညကနေ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ) မှ ၉ အထိအထိရှိသည်။ Kolmogorov – Smirnov test ပုံမှန်အကဲဖြတ်ဘို့အတိုင်းအတာသိသိသာသာ skewed ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ (skewness =0နှင့် kurtosis = 9) ။ တစ်နည်းအားဖြင့်လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများရမှတ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြန့်ဝေမှုနှုန်းဖြင့်တိုင်းတာသောပမာဏဖြစ်သည်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်သည်အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုဖော်ပြသည်။ အကဲဆတ်မှုအားတွက်ချက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးပြုလုပ်ထားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (“ ရလဒ်များ” အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ။ အတိုင်းအတာကို Efrati နှင့် Amichai-Hamburger တို့ကဟေဗြဲဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။2018).
အဆိုပါ Big ငါးခု Inventory မေးခွန်းလွှာ (BFI; ယောဟနျ, Donahue, & Kentle, 1991)
ကြီးငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအကဲဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ (ဟီးဘရူး version ကိုအသုံးပြုခဲ့Etzion & Laski, 1998) ကို BFI ၏ (ကိုလညျးရှု John & Srivastava, 1999) ။ မေးခွန်းပုံစံ (၄၄) ခုတွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတည်ဆောက်မှု (၅) ခုကိုဖော်ပြသည်။ extraversion (၈ ခု၊ ဥပမာ၊ “ များများစကားပြောလိုသည့်အရာ”)၊ သဘောတူလက်ခံနိုင်မှု (၉ ခု၊ ဥပမာ၊ “ အခြားသူများနှင့်မတူသောအသုံးဝင်သောတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုမရှိ”)၊ အတွေ့အကြုံများပွင့်လင်းမြင်သာမှု ( အချက် (၁၀) ခု၊ ဥပမာ -“ မူရင်း၊ အသစ်သောအတွေးအမြင်အသစ်များကိုတီထွင်သည်”)၊ သတိ (၉ ခု၊ ဥပမာ၊ “ စေ့စေ့စပ်စပ်အလုပ်လုပ်သည်”) နှင့် neuroticism (ပစ္စည်း ၈ ခု၊ ဥပမာ၊ “ စိတ်ဖိစီးမှုခံရနိုင်သည်”) ။ သင်တန်းသားများကိုကြေငြာချက်တစ်ခုစီသည်၎င်းတို့အား ၅ မှတ်ဖြင့်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတာကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုသည် (၁ မှ ၁ အထိအထိ) ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ5မှ - ပြင်းပြင်းထန်ထန် Cronbach ရဲ့α .75-.90 နှင့်အတူ,) သဘောတူသည်။
သင်တန်းသားများကိုကို (Revised UCLA ရဲ့အထီးကျန်ခြင်းစကေး၏ဟီးဘရူးဗားရှင်းပြီးစီးRussell, Peplau, & Cutrona, 1980; အားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော Hochdorf, 1989) ။ ဒီ Self-rated တူရိယာထဲမှာ 19 ပစ္စည်းများအထီးကျန်နှင့်လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေတဦးရဲ့ခံစားခကျြကိုတိုင်းတာ။ သင်တန်းသားများကိုနှင့် "ငါအလှည့်နိုင်ပါတယ်သူတယောက်မျှမရှိ" အဖြစ်သူတို့ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းခံစားချက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားပုံကိုမကြာခဏညွှန်ပြဖို့တောင်းနေကြတယ် "ငါသည်အခြားသူများထံမှအထီးကျန်ခံစားရတယ်။ " အဆင့်မြင့်ရမှတ်အထီးကျန် သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြသည်။ အတိုင်းအရှည်မြင့်မားသောပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (.89) ရှိပါတယ်။
သင်တန်းသားများကို (ဟေဗြဲဗားရှင်းပြီးစီးအာမရံ, 1996) Levenson ၏ (1981(24 ကနေအထိတစ်ဦး 6-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုခံစားချက်များကိုကိုတိုင်းတာသော) 1-ကို item စကေး - ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ6မှ - ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) ။ အခွင့်အလမ်း, အစွမ်းထက်အခြားသူများနှင့်ပြည်တွင်း: Levenson ရဲ့အတိုင်းအတာထိန်းချုပ်မှုသုံးမျိုးအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှု၏ပထမဦးဆုံးနှစ်မျိုးထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus ပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော "ငါ့ဘဝမတော်တဆအဖြစ်အပျက်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တို့သည်ကြီးစွာသောအတိုင်းအတာစေရန်" အဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူသဘောတူညီချက်နဲ့ "ငါလိုချင်တာတွေရသည့်အခါငါကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်များသောအားဖြင့်ဖွင့်" ဟုညွှန်ပြ ထိန်းချုပ်မှုအခွင့်အလမ်း locus။ ထိုကဲ့သို့သော "ကျွန်မဘဝအထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်အခြားသူတွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်" နှင့်တစ်ဦးကိုညွှန်ပြ "ကျွန်မလိုချင်တာတွေရယူခြင်းငါ့ကိုအထက်ရှိသူများကလူနှလိုအပ်ပါတယ်" အဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူသဘောတူညီခ ထိန်းချုပ်မှုအစွမ်းထက်အခြားသူတွေ locus။ ထိုကဲ့သို့သော "ကျွန်မတော်တော်များများဘဝမှာအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်" နှင့်တစ်ဦးကိုညွှန်ပြ "ငါလိုချင်တာတွေရသည့်အခါထိုသို့ငါခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောကွောငျ့, ကများသောအားဖြင့်ဖွင့်" အဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အတူနောက်ဆုံးအနေနဲ့သဘောတူညီချက် ထိန်းချုပ်မှုပြည်တွင်းရေး locus။ တစ်ခုချင်းစီကို subscale ရှစ်ထုတ်ပြန်ချက်များပါရှိသည်။ ကျနော်တို့သီးခြားပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက် subscales (α = .73), အခွင့်အလမ်းထိန်းချုပ်မှု (α = .77) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့နှင့်အစွမ်းထက်အခြားသူတွေ (α = .84) ထိန်းချုပ်ထားသည်။
(ပိတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစကေးအတွက် ECR ပူးတွဲမှုစတိုင်, ထိုအတွေ့အကြုံများ၏ဟီးဘရူးဗားရှင်းအကဲဖြတ်ရန်; နန် et al ။ , 1998; အားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသော Mikulincer & Florian, 2000) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ECR ဆိုသည်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲမှုပုံစံများ၏အဓိကရှုထောင့်နှစ်ခုဖြစ်သော - စိုးရိမ်ဖွယ်တွယ်တွယ်မှု (ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူသည်”) ကိုတိုင်းတာ။ အကဲဖြတ်သည့် ၃၆ ပုဒ် - စကေးနှင့်ရှောင်လွှဲနိုင်သောပူးတွဲဖိုင် (ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေစွာဖွင့်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အခြားလူများအထိ ") ။ သင်တန်းသားများကိုပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကသူတို့ကိုအမှတ် ၇ မှတ်ဖြင့်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတာကိုသတ်မှတ်သည် - အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး7မှ - အများကြီး) ။ လက်ရှိနမူနာမှာတော့ Cronbach ရဲ့αတန်ဖိုး 18 စိုးရိမ်စိတ်ပစ္စည်းများ (.91) နှင့် 18 ရှောင်ရှားပစ္စည်းများ (.83) အတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သတစ်ဦးချင်းစီ subscale ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်နှစ်ခုရမှတ်များတွက်ချက်။
လေ့လာမှု 1 ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဒါမြီးကောင်ပေါက်အကြား hypersexual အပြုအမူတစ်ခုသုံးစပျစ်သီးပြွတ်ပရိုဖိုင်း၏တည်ရှိမှုပုံတူပွားစေရန်, LPA အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ LPA အောက်ပါ, (လေ့လာမှု 1 အတွက်ဆင်းသက်လာကြောင်းဆင်တူ: ရှောင်ကြဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့် CSB) ကိုတစ်ဦးချင်းစီ CSB ပရိုဖိုင်းကိုကယ်တင်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရေအတွက်အတိုင်းအတာထဲမှာ CSB profile များကိုအကြားကွဲပြားခြားနားမှု (Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောက်လုပ်ရေး, ထိန်းချုပ် locus, ပူးတွဲဖိုင်ကိုလမ်းကြောင်းမတူညီ, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, မိသားစု SES, နေထိုင်ရာအရည်အသွေး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု) ဆနျးစစျဖို့ကျနော်တို့တဦးတည်း၏အစီးရီးကောက်ယူ -way ကှဲလှဲ (ANOVAs) ၏လေ့လာဆန်းစစ်။ အရေးပါမှုအဆင့်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အကောင့် familywise Bonferroni ဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားသောစမ်းသပ်မှုထင်ရှားသောအခါ Sidak Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ အရည်အသွေးတိုင်းတာမှုများ (ဘာသာရေးအခြေအနေ, ကျား, မ, နှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ), Fisher ကယ့်အတိအကျχအတွက် hypersexual profile များကိုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့2 အစီအမံ၏လွတ်လပ်ရေးစမ်းသပ်မှုအလုပ်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကို IDC မှ Herzliya ၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ပုံစံများနှင့်မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်လေ့လာမှုကာလမတိုင်မီကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ LPA လေ့လာမှု 1 ၏ရလဒ်များကိုပုံတူကူးယူခြင်းနှင့်ဆင်တူ CSB profile များကိုထုတ်ဖော်ပြသ။ ပုံထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း 2နမူနာ၏ 86% အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်နမူနာ 51.5% နှစ်ခု subclasses နှင့်အတူ Non-CSB ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား ရှောငျကွဉျ (n I-CSB မေးခွန်းလွှာ၏ subscales အားလုံးတွင်နိမ့်သောရမှတ်များပြသခဲ့ပြီး ၃၄.၂%၊n အဖြစ်နမူနာ၏ = 217) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်-related အနုတ်လက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအတွက်မြင့်မားသောရမှတ်များတင်ပြထိခိုက်စေခြင်း, အတှေးအနိမ်ရမှတ်မလိုချင်တဲ့အကျိုးဆက်များပေါ်နှင့်စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ တတိယအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ CSBs (နမူနာများ 14.0% ပါဝင်သောn = 84) အပေါင်းတို့နှင့်တကွလေး CSB အချက်များအတွက်မြင့်မားသောရမှတ်များပြသခဲ့သည်။
ပုံ2။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏အတန်း (လေ့လာမှု 2)
Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောက်လုပ်ရေး, ထိန်းချုပ်မှု, ပူးတွဲမှုစတိုင်များ, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, မိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေ, နေထိုင်ရာအရည်အသွေး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ပြည်တွင်းရေး locus: ANOVAs လာမယ့်အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များတွင်ဤအုပ်စုများခွဲခြားဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နည်းလမ်, စံသွေဖီ, univariate စာရင်းဇယားများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားဇယားအတွက်တင်ပြကြသည် 2.
စားပွဲတင်2။ နည်းလမ်, စံသွေဖီ (SDs ကို), univariate စာရင်းဇယားများနှင့်အရေအတွက်အတိုင်းအတာထဲမှာ CSB profile များကိုအကြားခြားနားချက်များများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား
ရှောငျကွဉျ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ CSB F(2, 616) η2
နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော 3.60a 0.58 3.52 0.60 3.37b 0.54 4.85 ** 0.02
အသိစိတ် 3.48a 0.65 3.29b 0.62 3.32 0.65 5.48 ** 0.02
အတှေ့အကွုံမှပွင့်လင်း 3.72 0.83 3.66 0.79 3.74 0.70 0.43 0.00
ထိန်းချုပ်မှု internal locus 3.62 0.67 3.64 0.61 3.65 0.62 0.08 0.00
ထိန်းချုပ်မှုအစွမ်းထက်အခြားသူတွေ locus 2.13a 0.70 2.48b 0.65 3.19c 0.85 61.83 *** 0.20
ထိန်းချုပ်မှုအခွင့်အလမ်း locus 2.33a 0.64 2.51b 0.59 2.84c 0.92 17.17 *** 0.06
attachment စိုးရိမ်ပူပန် 3.04a 1.23 3.45b 1.14 4.22c 1.19 33.88 *** 0.10
attachment ရှောင်ရှားခြင်း 3.23a 0.94 3.39a 0.90 3.88b 1.01 16.12 *** 0.05
အထီးထီးနေခြင်း 31.31a 9.04 34.25b 9.29 42.70c 11.08 48.69 *** 0.14
အသက်အရွယ် 16.70 1.19 16.80a 1.14 16.41b 1.16 3.32 * 0.01
မိသားစုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း 1.68a 0.53 1.72a 0.56 2.00b 0.71 10.79 *** 0.03
နေအိမ်သို့အရည်အသွေးကို 2.04a 0.48 1.98a 0.50 2.20b 0.64 5.72 ** 0.02
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း 1.49a 0.83 2.29b 1.05 2.83c 0.89 92.63 *** 0.23
လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု 1.18a 1.94 1.86b 2.28 3.28c 2.85 30.95 *** 0.09
မှတ်စု။ Superscript အက္ခရာများ .05 မှာသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ CSB: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
#p <.10 ။ *p <.05 ။ **p <.01 ။ ***p <.001
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု CSB (CSB မပါဘဲမြီးကောင်ပေါက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်, ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus နေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုစတိုင်, အထီးကျန်အဆင့်မြင့်, PU မြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့်ပိုပြီးလိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားမိသားစုသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ထင်ရှား SES နှင့်နေထိုင်ရာအရည်အသွေးသည်။ CSB နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်မြီးကောင်ပေါက်ရှောင်ထက်နှငျ့ညီညှတျလည်း neuroticism အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ခဲ့ကြပေမယ့်ဒီအစီအမံအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျကှာခွားခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျမြီးကောင်ပေါက်ရှောင်ထက်ပိုပြီးလူကန်လန်ရှိကြ၏။
Fisher ကယ့်အတိအကျχ2 အစီအမံ၏လွတ်လပ်ရေးစမ်းသပ်မှုလာမယ့် (ရှိခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိသည်ခဲ့ရပါဘူး) ယာနျဘာသာတရားကို (လောကနှင့်ဘာသာရေး), ကျား, မ (ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ) ပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဤအုပ်စုများခွဲခြားဖို့ကောက်ယူနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအုပ်စုများχ [ကျားမအတွက်ကွဲပြားကြောင်းထင်ရှား2(2) = 62.93, p <.001] နှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ [χ2(2) = 34.45, p <.001], ဒါပေမယ့်ဘာသာရေးအဆင့်အတန်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး [χ2(2) = 1.31, p = .517] ။ အထူးသဖြင့် CSB နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ်ကူးယဉ်သူများပါသောမြီးကောင်ပေါက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်များ (၃၉.၇%) ကိုရှောင်ခြင်းထက်ယောက်ျားလေးများ (၇၃.၈% နှင့် ၇၀.၅% အသီးသီး) ပိုများသည်။ ထို့အပြင် CSB နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၌လိင်စိတ်ကူးယဉ်သူများ (၅၉.၄%) ထက်အော့ဖ်လိုင်းလိင်အတွေ့အကြုံ (၇၂.၆%) ရှိပြီး၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားဆီးခြင်း (73.8%) ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ဤသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ CSB ၏ discrete ပြွတ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဤပြွတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာအချက်များခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိစေရန်, ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,800 အစ္စရေးဆယ်ကျော်သက်အပေါ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 1 ခုနှစ်, LPA အကောင်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB ၏ profile များကိုဖော်ပြထားကြောင်းသုံးစပျစ်သီးပြွတ်ဖြေရှင်းချက်အဝတ်မခြုံဘဲ: ရှောင် မြီးကောင်ပေါက် (53.8%), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ (34.2%), နဲ့အတူမြီးကောင်ပေါက် CSB, (12.0%) ။ တစ်နည်းအားဖြင့်, (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ဟာမြီးကောင်ပေါက်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်သော်လည်း, နမူနာများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်းဒသမ CSB ၏မြင့်မားသောအဆင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်အချိုး (ကောလိပ်ကျောင်းသားများကြောင်း 11.1% ကိုညွှန်းယခင်သုတေသနနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်Giordano & Cecil, 2014) ပစ္စုပ္ပန် hypersexual အပြုအမူ။
လေ့လာမှု2တှငျကြှနျုပျတို့သုံး profile များကိုသို့လေ့လာ 1 ရဲ့ခွဲခြားပုံတူကူးယူခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, ထိန်းချုပ်မှု, ပူးတွဲမှုစတိုင်များ, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, SES, နေထိုင်ရာအရည်အသွေး, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကျား, မ၏ locus အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ဤ profile များကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ကျနော်တို့ကို (CSB အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်) CSB လက္ခဏာတွေမြင့်မားနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့်ရှောင်မြီးကောင်ပေါက်မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus, စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှု, သာ. ကြီးမြတ်အထီးကျန်, PU မြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့်ပိုပြီးလိင်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု -related ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုထိုကဲ့သို့သော CSB, အထီးကျန်ဆန် (အကြားလင့်များအဖြစ်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌ရှိကြ၏နေစဉ်Dhuffar et al ။ , 2015ထိန်းချုပ်မှု) နဲ့ပြင်ပ locus (Pharr et al ။ , 2015), လက်ရှိသုတေသနပြုလည်းအများအပြားထူးခြားတဲ့နှင့်ဝတ္ထုရလဒ်များ။
ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပ locus တဦးတည်း၏ဘဝတှငျဖြစ်ရပ်များမထိန်းချုပ်အချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောယုံကြည်ချက်မှပြောပြတယ်။ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် Impulses သတင်းပို့၏ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြင့်မားသောအနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related အတွေးများနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတုံ့ပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေပြီအဘယ်ကြောင့်ဒီအရိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဤအလူတစ်ဦးချင်းစီကလူထိန်းအကွပ်မဲ့တပ်ဖွဲ့များကမောင်းနှင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့်, သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ဖို့မလုံလောက်ခံစားရဒါသူတို့ရဲ့မလိုချင်တဲ့အတှေး၏အကျိုးဆက်များကိုကြောက်နေကြသည်လိမ့်မည်။ ဒါကအမြင်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး၏အကျိုးဆက်များကိုစိုးရိမ်ပူပန်လျက်, သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သူဆယ်ကျော်သက်ရှောင်မှ၎င်း, ကိုထိခိုက်မြင့်မားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာကနေမခံစားဘူးပါဘူးသူကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျမှသူတို့ကိုခွဲခြား။ သုတေသနအမှန်ပင် (အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှထိန်းချုပ်ပြင်ပ locus နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Pharr et al ။ , 2015; စိန့်လောရင့်, 1993), ကွန်ဒုံးဝတ်ထား၏အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကဲ့သို့သော။
တစ်ခုစိုးရိမ်ပူးတွဲမှုစတိုင်ရငျးနှီးမှု, ထောက်ခံမှု, ချစ်ခင်ခြင်း, မတ်ေတာအတှကျကွိုးစားကွ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်ငြင်းပယ်ခံရကိုကြောက်ရွံ့တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်သောခံယူချက်ကင်းမဲ့သူအလူများ၏ပုံမှန်ပါပဲ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်သော CBS attachment ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအထဲ၌တည်တဲ့သူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များ မှစ. အထီးကျန်ခံစားရသူတွေကိုလည်းနွေးထွေးမှု, ရငျးနှီးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမရှိခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးငွေကိုရှာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသန CSB ဆက်စပ်ရာမှ PU, တစ်ဦးမလုံခြုံပူးတွဲမှု (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း) အတွက်လျော်ကြေးနှင့်အထီးကျန်ဆန် (အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းပြသထားပါတယ်Efrati & Amichai-Hamburger, 2018) ။ ဒါကြောင့် CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကို attachment, ညစ်ညမ်း၏အထီးကျန်, အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့်ရှောင်မြီးကောင်ပေါက်ထက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလေးစားခြင်းဖြင့်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့်ရှောင်မြီးကောင်ပေါက်ထက်ပိုမိုမြင့်မား SES ရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနအမြင့်ဆုံး SES ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု (အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစှဲဖို့ပြောပြတယ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်Hanson & Chen က, 2007) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ကလိင်မိတ်ဖက်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ (Nesi & Prinstein, 2018) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြင့်သော SES အများအပြားအနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေများအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါလက္ခဏာများ (ရှိပါတယ်Luthar & Becker က, 2002; Luthar & D'Avanzo, 1999; Luthar & Latendresse, 2005) ။ ဒါကအန္တရာယ်ကြောင့်အမြင့်မားအလုပ်အကိုင်များတောင်းဆို၏, လှုပ်ရှားမှုများ overscheduling ကနေပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဖိအားရပ်တနှင့် / သို့မဟုတ်မိဘများအနေဖြင့်အကွာအဝေးကိုပေမည်။ လူသာနှင့် Latendresse (အဆိုအရ2005), SES မြင့်မားသောဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့ခံစားရသောစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောကျန်းမာရေးအပြုအမူများပြုလုပ်ကြသည်။ CSB တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန် (ဥပမာ - CSB ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ပါဝင်သောကြောင့်မြင့်မားသော SES မြီးကောင်ပေါက်များသည် CSB ကို escapism ကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။
အပြင်ကဤကွဲပြားခြားနားမှုကနေကျနော်တို့ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမြီးကောင်ပေါက် (သို့သော်မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ) ရှောင်ခြင်းထက်သိသိသာသာပိုပြီး neurotic နှင့်လျော့နည်းနှငျ့ညီညှတျကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပေါ်သုတေသနယခင်ကမြင့်မားသော neuroticism နှင့်အောက်ပိုင်းနှငျ့ညီညှတျဖို့ CSB နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Fagan et al ။ , 1991; Pinto, Carvalho, & Nobre, 2013; Reid, လက်သမား, Spackman & Willes, 2008; Reid, Stein, & လက်သမား, 2011; Rettenberger, Klein, & Briken, 2016; ဝေါ်လ်တန်, Cantor, & Lykins, 2017; Zilberman et al ။ , 2018) ။ အနိမျ့နှငျ့ညီညှတျသဟဇာတလူမှုရေးဆက်ဆံရေး (ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းမှပြောပြတယ်Graziano & Eisenberg, 1997) နှင့် (ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံးလူ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Laursen, Hafen, Rubin, Booth-LaForce, & Rose-Krasnor, 2010; ဝမ်, Hartl, Laursen, & Rubin က, 2017) ။ အတူတူစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ESCAP ၏လိုအပ်မှပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုမှပြောပြတယ်ရာမြင့်သော neuroticism နှင့်အတူပြုလုပ် porn နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအလွဲသုံးစားမှုမပါဝင်သည့်ထိုကဲ့သို့သော sexting နှင့်ကျဘာအဖြစ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြားပုံစံ၏ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျမြီးကောင်ပေါက်ရှောင်ထက်ပိုပြီးလူကန်လန်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ လူကန်လန်အပြုအမူ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများတစ်ဦးခွဲခြား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ပထမ (Jung နေဖြင့်အဆိုပြုခဲ့သည်1921) ။ Jung အဆိုအရအနေနဲ့လူကန်လန်ရပ်တည်ချက်ဘယ်သူ၏လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပြင်ပအခြေအနေများအကြားသဟဇာတမဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အချက်များကညွှန်ကြားကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအပြုအမူကိုအခြားသူများ၏တရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ သာ. နှစ်သက်, ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ထင်ရှားနေသည် - အပြုအမူ extrovert မှမတူဘဲ။ ဒါဟာ (ရငျးနှီးအဘို့အပင်ကိုတောငျ့တဖြစ်ကောင်း, လိင်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အလွန်အကျွံလိုအပ်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အလိုဆန္ဒနှင့်လိုအပ်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဒါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ, လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ကိုဖန်တီးရန်လူကန်လန်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကြိုးပမ်းမှုအားဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်ပုံMorrison, 2008; Stolorow, 1994, 2002).
ကျားကိုလည်း CSB အတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ CSB နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်ရှောင်ထက်ယောက်ျားလေးကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ယခင်လေ့လာမှုများ (ယောက်ျားလေးများလိင်တက်ကြွဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြပွီ, ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးတွေထက်လိင်စိတ်နိုးထတဲ့အဆင့်မြင့်ရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းCantor et al ။ , 2013; ရိဒ်, 2013) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, CSB ပိုမိုမြီးကောင်ပေါက်အလှည့်ထဲမှာဆယ်ကျော်သက်ရှောင်ထက်ပိုပြီးအော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျထက်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ မကြာသေးမီကသုတေသနနှင့် ပတ်သက်. ဤအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက် (လိင်တက်ကြွအော့ဖ်လိုင်းနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းလိင်တက်ကြွအွန်လိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြသŠevčíková et al ။ , 2018) ။ CSB ၏အဆင့်မြင့် porn နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုမြင့်မားအသုံးပြုမှုဆက်စပ်ကြောင့်အုပ်စုများလည်းအော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ကွာခြားဘာကြောင့်ရှင်းပြပေမည်။
ယေဘုယျအားထိန်းချုပ်မှု, စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုနှင့်အထီးကျန်ပြင်ပ locus သည်အခြားအချက်များထက် CSB ၏အားကောင်း antecedents ဖြစ်ပုံရသည်။ သုတေသနအတိတ်ကာလ CSB နှင့်အတူ neuroticism နှင့်နှငျ့ညီညှတျနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပေမဲ့ကအနည်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြားဤစရိုက်များ CSB နှင့် Non-CSB အပြုအမူတွေကို (အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျ) အကြားခွဲခြားမပုံရသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြား CSB ၏ antecedents သိမှတ်ကြလော့အန္တရာယ်အုပ်စုများ၏ထောက်လှမ်း enable နှင့်လိုအပ်နေသူတို့အားကုထုံးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်ကုသကူညီရန်နှင့်အရှင်လူကြီးအတွက် CSB ၏အနုတ်လက္ခဏာဂယက်ရိုက်ရှောင်ရှားရန်နိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအဆောက်အအုံကိုထောက်ပံ့သော်လည်းသုတေသနတွင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုများကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကောက်ချက်များအတွက်စွမ်းရည်ကိုထပ်မံတားဆီးသောဆက်စပ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ CSB အပြုအမူ၏ပင်ကိုစရိုက်များနှင့်လုံခြုံမှုမရှိသောပူးတွဲမှုတို့ကြောင့်လားဆိုတာမသေချာပေ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, မလုံခြုံသောပူးတွဲမှုနှင့် CSB အကြားအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကို ထပ်မံ၍ စူးစမ်းလေ့လာရန် longitudinal လေ့လာမှုများလိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိသုတေသနတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PU ကိုတိုင်းတာမှုများကိုကြိမ်နှုန်းအားလုံးကိုမဖုံးသောတစ်ခုတည်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ နောင်လေ့လာမှုများသည် PU ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာအကဲဖြတ်ခြင်း (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံခြင်း၊ PU အတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု) နှင့် / သို့မဟုတ် PU သာမကသာမကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုပါအကဲဖြတ်နိုင်သည်။Grubbs, ပယ်ရီ, Wilt, & Reid, 2018) ။ ထို့ကြောင့်, ညစ်ညမ်းနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိတွေ့ရှိချက်သတိနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အချက်များ၏ကြီးမားသောခင်းကျင်းဖုံးလွှမ်းပေမယ့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခြားအချက်များကစားအတွက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ, (လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ ပို. ပင်ဒါကြောင့်ကျားမထက် CSB ရှင်းပြဘို့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်Bőthe, Bartók, et al ။ , 2018) ။ အနာဂတ်သုတေသနလက်ရှိသုတေသန၏အတိမ်အနက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နောက်ထပ်အချက်ဆနျးစစျသငျ့သညျ။
လက်ရှိပညာအလုပ်အပျေါမှာတည်ဆောက်ခြင်း, ဒီလေ့လာမှုမဟုတ်ဘဲ CSB ပြသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားတူညီထက်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရုပ်ပြတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့် CSB နှင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်သို့နောက်ထပ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ ဒါဟာသုတေသနထပ်မံရှောင်ကြဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉျနှင့် CSB ပါဝင်သည်သုံးခုအတန်းသို့မြီးကောင်ပေါက်ခွဲခြားခြင်းဖြင့် CSB နားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ။ ဤအအတန်းတစ်ခုချင်းစီနဲ့ Big ငါးခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆောက်လုပ်ရေး, ထိန်းချုပ် locus, ပူးတွဲမှုစတိုင်, အထီးကျန်ဆန်, အသက်, မိသားစု SES, နေထိုင်ရာအရည်အသွေး, ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှု, လိင်-related အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှု, ကျား, မ, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အသက်အရွယ်ကိုရည်မှတ်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ လက်ရှိသုတေသန CSB မှာအသေးစိတ်ကြည့်တာနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း CSB နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကပိုပြီးတိကျမှုနှင့်ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုမြှင့်တင်ရန်၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးသည်။
သင်တို့က, လေ့လာမှုကောက်ယူရလဒ်ကိုသုံးသပ်နှင့်လေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးမူကြမ်းရေးသားခဲ့သည်။ MG စက္ကူ edited နှင့်စက္ကူဖို့အရေးပါသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့ဖြည့်စွက်အကြံပြုသည်။
Amichai-Hamburger, Y. , & Efrati, Y. (ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်) အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်စေဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်နေသောဆယ်ကျော်သက်များသည်မည်သူများနည်း၊ Google Scholar
အာမရံ, Y. (1996) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်ကုထုံးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ကုသမှုစဉ်အတွင်းကုထုံးဝိသေသလက္ခဏာများကုသမှုရလဒ်ကို။ (ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရသေးသောပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း) ။ ဟီးဘရူးတက္ကသိုလ် (ဟီဘရူး), ဂျေရုဆလင်, ဣသရေလ။ Google Scholar
Arnett, ဂျေဂျေ (1992) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မဆင်မခြင်အပြုအမူ: တစ် ဦး ကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 12 (4), 339-373 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/0273-2297(92)90013-R Crossref, Google Scholar
Birnbaum, G. အအီး, Reis, အိပ်ချ်တီ, Mikulincer, အမ်, Gillath, O. , & Orpaz, အေ ​​(2006) ။ လိင်သည်လိင်မှုသာမဟုတ်ပါကချိတ်ဆက်ထားသည့် ဦး တည်ချက်များ၊ လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 91 (5), 929-943 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.5.929 Crossref, Google Scholar
Blos, P. (1979) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကျမ်းပိုဒ်: Developmental ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။ နယူးယောက်, NY: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များနှိပ်ပါ။ Google Scholar
Bőthe, ခ, Bartók, R. , Tóth-Király, ဗြဲ, ရိဒ်, R. C. , Griffiths က, အမ်,, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ လိင်ကွဲပြားမှု၊ ကျားမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု - ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တမ်းလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ ၁-၁၂ ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-018-1201-z Google Scholar
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, အမ်,, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ပြtheနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55 (3), 395-406 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1291798 Crossref, Medline, Google Scholar
Bowlby, ဂျေ (1973) ။ attachment နဲ့အရှုံး: Vol ။2။ ခွဲခြာ: ပူပန်ခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသ။ နယူးယောက်, NY: အခြေခံပညာစာအုပ်များ။ Google Scholar
Bowlby, ဂျေ (1980) ။ attachment နဲ့အရှုံး: Vol ။3။ ဝမ်းနည်းမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ။ နယူးယောက်, NY: အခြေခံပညာစာအုပ်များ။ Google Scholar
Bowlby, ဂျေ (1982) ။ attachment နဲ့အရှုံး: Vol ။ 1 ။ attachment (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: အခြေခံပညာစာအုပ်များ။ Google Scholar
နန်, K. အေ, Clark က, C. L. , & Shaver, P. R. (1998) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်ခုန်စရာတွယ်တာမှုများကိုကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်း - ပေါင်းစပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဂျေအေ Simpson & ဒဗလျူအက်စ် Rholes (Eds ။ ), ပူးတွဲသီအိုရီနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး (စစ။ 46-76) ၌တည်၏။ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်။ Google Scholar
Cantor, ဂျေအမ်, Klein, C တို့, Lykins, အေ, Rullo, ဂျေအီး, Thaler, အယ်လ်, & Wall, ခ R. (2013) ။ Self- ဖော်ထုတ် hypersexuality ရည်ညွှန်းတဲ့ကုသမှု -oriented ပရိုဖိုင်းကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 42 (5), 883-893 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-013-0085-1 Crossref, Google Scholar
Collins, N. L. , & Allard, L. အမ် (2004) ။ ပူးတွဲမှု၏သိမှုကိုယ်စားပြု: အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်များ၏အကြောင်းအရာနှင့် function ကို။ ကို MB Brewer, & အမ် Hewstone (Eds ။ ), လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု (စစ။ 75-101, XII, p ။ 368) ၌တည်၏။ Malden, MA: ဘလက်ဝဲလ်ထုတ်ဝေမှု။ Google Scholar
de Crisce, ဃ (2013) ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်လိင်စွဲလမ်းနှင့် hypersexual အပြုအမူတွေ။ R. Rosner (Ed က။ ), ဆယ်ကျော်သက်စွဲ (စစ။ 362-376) ၏လက်တွေ့လက်စွဲစာအုပ်၌တည်၏။ Chichester, ဗြိတိန်: Wiley ။ Crossref, Google Scholar
Delmonico, L. L. , & Griffin, အီးဂျေ (2010) ။ Cybersex စွဲနှင့် compulsivity ။ K. S. Young & C. N. de Abreu (။ Eds) တွင်အင်တာနက်စွဲစွဲမှု - အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့်လမ်းညွှန် (စစ ၁၁၃-၁၃၄) ။ နယူးယောက်, NY: Wiley ။ Google Scholar
Dhuffar, အမ်, Pontes, အိပ်ချ်အမ်, & Griffiths က, အမ် ((2015) ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်နေသဘောထားအခြေအနေများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား hypersexuality ခန့်မှန်းအတွက် hypersexual အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကို၏အခန်းကဏ္.ကို။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,4(3), 181-188 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.030 လင့်ခ်, Google Scholar
Efrati, Y. (2018a) ။ ဘုရားသခငျသညျငါ sex အကြောင်းစဉ်းစားရပ်တန့်မပေးနိုငျသညျ! ဘာသာရေးမြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများမအောင်မြင်ဖိနှိပ်မှုအတွက်ပြန်တက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1461796 Crossref, Google Scholar
Efrati, Y. (2018b) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတင်းအကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ဒါဟာထူးခြားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်လား။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1452088 Crossref, Google Scholar
Efrati, Y. (2018c) ။ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထားရှိသည့်ဆယ်ကျော်သက်များ - အကူအညီနှင့်ကုသမှုခံယူလိုစိတ်ရှိခြင်းအတွက်ရှက်ဖွယ်ရာအခန်းကဏ္ The ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ ၁-၁၈ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2018.1454371 Google Scholar
Efrati, Y. , & Amichai-Hamburger, Y. (2018) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အထီးကျန်မှုနှင့်အစ္စရေးဆယ်ကျော်သက်များအကြားလူမှုရေးအရဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းအတွက်လျော်ကြေးအဖြစ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ Doi:https://doi.org/10.1177/0033294118797580 Crossref, Google Scholar
Efrati, Y. , & Gola, အမ် (2018) ။ compulsive လိင်အပြုအမူ - တစ်ဆယ့်နှစ်ဆင့်ကုထုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,7(2), 445-453 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.26 လင့်ခ်, Google Scholar
Efrati, Y. , & Mikulincer, အမ် (2018) ။ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကေး - ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားစစ်ဆေးရာတွင်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရေးပါမှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 44 (3), 249-259 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1405297 Crossref, Medline, Google Scholar
Etzion, D. , & Laski, အက်စ် (1998) ။ 44-item BFF Inventory ကိုဟီဘရူးဘာသာဖြင့်။ တဲလ်အဗစ် - ယာဖို၊ အစ္စရေး - တဲလ်အဗစ်တက္ကသိုလ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ စီးပွားရေးသုတေသနဌာန။ Google Scholar
Fagan, P. ဂျေ, ပညာရှိ, T. N. , Schmidt က, C. ဒဗလျူ, Jr. Ponticas, Y. , မာရှယ်, R. ,, & ကော့စ, P. တီ, Jr (1991) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားနှင့် paraphilia နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ငါးအချက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ၏နှိုင်းယှဉ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 57 (3), 434-448 ။ Doi:https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5703_4 Crossref, Google Scholar
Gilliland, R. , အပြာရောင်စတား, ဂျေ, Hansen, ခ, & လက်သမား, ခ (2015) ။ hypersexual လူနာနမူနာအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုပူးတွဲမှုစတိုင်များ။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41 (6), 581-592 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2014.958787 Crossref, Google Scholar
Giordano, အေအယ်လ်, & Cecil, အေအယ်လ် (2014) ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဘာသာရေးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ လိင်စွဲ & compulsivity, 21 (3), 225-239 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2014.936542 Crossref, Google Scholar
Gola, အမ်, Miyakoshi, အမ်, & Sescousse, G. အ (2015) ။ လိင်, Impulse နှင့်စိုးရိမ်စိတ်: ventral striatum နှင့်လိင်အပြုအမူအတွက် amygdala ဓာတ်ပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်, 35, 15227-15229 ။ Doi:https://doi.org/10.1523/jneurosci.3273-15.2015 Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် N. (2018) ။ ပညာရေး၊ ခွဲခြားခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအစပျိုးခြင်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - အပေါ်မှတ်ချက် - ICD-11 တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားမမှန်စေခြင်း (Kraus et al ။ , 2018) ။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,7(2), 208-210 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.51 လင့်ခ်, Google Scholar
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခ, Wypych, အမ်, Potenza, အမ်, & Marchewka, အေ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သလော။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက် fMRI လေ့လာချက်။ Neuropsychopharmacology, 42 (10), 2021-2031 ။ Doi:https://doi.org/10.1038/npp.2017.78 Crossref, Medline, Google Scholar
Graziano, ဒဗလျူဂျီ, & Eisenberg, N. (1997) ။ Agreeableness: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ရှုထောင်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ် R. Hogan, အက်စ် Briggs, & ဂျေဂျွန်ဆင် (Eds ။ ) (စစ။ 795-824) ၌တည်၏။ San Diego မှ, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း။ Crossref, Google Scholar
Grubbs, ဂျေခ, ပယ်ရီ, အက်စ်အယ်လ်, Wilt, ဂျေအေ, & ရိဒ်, R. C. (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ ၁-၁၉ ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x Google Scholar
Hanson, အမ် D. , & Chen ကအီး (2007) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်ကျန်းမာရေးအပြုအမူများ - စာပေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အပြုအမူဆေးပညာဂျာနယ်, 30 (3), 263-285 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10865-007-9098-3 Crossref, Google Scholar
Herbenick, D. , Reece, အမ်, Schick, V. , Sanders, အက်စ်အေ, Dodge, ခ, & Fortenberry, ဂျေ D. (2010) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လိင်အပြုအမူ - အမျိုးသား ၁၄ ဦး မှ ၉၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောနမူနာမှရလဒ်များ။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 14 (ပျော့ပျောင်း။ 94), 7-5 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.02012.x Crossref, Google Scholar
Hochdorf, Z. (1989) ။ အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်သတ်သေအပြုအမူများကာကွယ်တားဆီးရေး (စာတမ်း) ။ ပညာရေး, ဟိုင်ဖာတက္ကသိုလ်, ဟိုင်ဖာ, ဣသရေလအမျိုး၏ကျောင်း။ Google Scholar
ယောဟနျ, O. P. , Donahue, အီး, & Kentle, R. (1991) ။ ၅ ။ စာရင်း - ဗားရှင်း 4a နှင့် 54. Berkeley, CA: University of California ။ Google Scholar
ယောဟနျ, O. P. , & Srivastava, အက်စ် (1999) ။ The Big Five Trait Taxonomy: သမိုင်း၊ တိုင်းတာမှုနှင့်သီအိုရီအမြင်များ။ အယ်လ် Pervin & O. P. ဂျွန် (။ Eds ။ ), ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏လက်စွဲစာအုပ်: သီအိုရီနှင့်သုတေသန (။ 2nd ed, စစ 102-138 ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford ။ Google Scholar
Jung, C တို့ဂျေ (1921) ။ Psychologischen Typen (HG Baynes, Trans ။ , 1923) ။ Zurich, Switzerland: Rascher Verlag ။ Google Scholar
Kaplan, အမ်အက်စ်, & Krueger, R. ခ (2010) ။ hypersexuality ၏ရောဂါ, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု: လိင်သုတေသန၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 47 (2-3), 181-198 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224491003592863 Crossref, Medline, Google Scholar
Kor, အေ, Fogel, Y. အေ, Reid, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်များ၊ ၂၀ (၁-၂)၊ ၂၇-၄၇ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2013.768132 Google Scholar
Kühn, အက်စ်, & Gallinat, ဂျေ (2016) ။ hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ။ Neurobiology ၏နိုင်ငံတကာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 129, 67-83 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/bs.irn.2016.04.002 Crossref, Medline, Google Scholar
Laursen, ခ, Hafen, C. အေ, Rubin က, K. အိပ်ချ်, Booth-LaForce, C တို့, & နှင်းဆီ - Krasnor, L. (2010) ။ မနှစ်သက်သောလူငယ်များ၏ထူးခြားသောအခက်အခဲများ။ Merrill-Palmer ကလပတ်, 56 (1), 80-103 ။ Doi:https://doi.org/10.1353/mpq.0.0040 Crossref, Google Scholar
Levenson, အိပ်ချ် (1981) ။ internality, အစွမ်းထက်အခြားသူများနှင့်အခွင့်အလမ်းအကြားခွဲခြား။ Vol:: အိပ်ချ်အမ် Lefcourt (Ed က။ ), ထိန်းချုပ်မှုဆောက်လုပ်၏ locus နှင့်အတူသုတေသန၌တည်၏။ ၁။ အကဲဖြတ်နည်းများ (စစ။ ၁၅-၆၃) ။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ Crossref, Google Scholar
Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေခြင်း။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်, 56 (4), 445-456 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.063 လင့်ခ်, Google Scholar
မတ်ေတာ, တီ, Laier, C တို့, အမှတ်တံဆိပ်, အမ်, Hatch, အယ်လ်, & Hajela, R. (2015) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်း။ အပြုအမူသိပ္ပံ,5(3), 388-433 ။ Doi:https://doi.org/10.3390/bs5030388 Crossref, Google Scholar
Luthar, အက်စ်အက်စ်, & Becker က, ခအီး (2002) ။ အခွင့်ထူးခံပေမယ့်ဖိအားပေး? ချမ်းသာကြွယ်ဝလူငယ်တစ် ဦး ကလေ့လာမှု။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, 73 (5), 1593-1610 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/1467-8624.00492 Crossref, Google Scholar
Luthar, အက်စ်အက်စ်, & D'Avanzo, K. (1999) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက် Contextual အချက်များ: ဆင်ခြေဖုံးနှင့်အတွင်းပိုင်း - မြို့ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ ဖွံ့ဖြိုးရေး & စိတ်ပညာ, 11 (4), 845-867 ။ Doi:https://doi.org/10.1017/S0954579499002357 Crossref, Google Scholar
Luthar, အက်စ်အက်စ်, & Latendresse, အက်စ်ဂျေ (2005) ။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၏ကလေးများ - သုခချမ်းသာစိန်ခေါ်မှုများ။ Psychosomatic Medicine, 14, 49-53 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00333.x Google Scholar
MacInnis, C. C. , & Hodson, G. အ (2015) ။ ဘာသာရေးနှင့်ရှေးရိုးစွဲလူ ဦး ရေများသောအမေရိကန်နိုင်ငံများသည်ဂူးဂဲလ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုရှာဖွေပါသလား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 44 (1), 137-147 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0361-8 Crossref, Google Scholar
McCrae, R. R. , & ကော့စ, P. တီ (1994) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏တည်ငြိမ်မှု: လေ့လာရေးနှင့်အကဲဖြတ်။ စိတ်ပညာသိပ္ပံ,3(6), 173-175 အတွက်လက်ရှိလမ်းညွန်။ Doi:https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770693 Crossref, Google Scholar
Mikulincer, M. , & Florian, V. (2000) ။ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်သေဆုံးမှုနှင့်ဆိုင်သောထူးခြားချက်များကိုရှာဖွေခြင်း - ပူးတွဲမှုပုံစံသည်အကြမ်းဖက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားများကိုထိန်းချုပ်ပါသလား ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 79 (2), 260-273 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.2.260 Crossref, Google Scholar
Mikulincer, အမ်, & မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, P. R. (2007) ။ ပူးတွဲမှုနှင့်လိင်၏ psychodynamics အပေါ်တစ် ဦး ကအပြုအမူစနစ်များရှုထောင့်။ Diamond စိန်, အက်စ်ဂျေ Blatt, & ဂျေ D. Lichtenberg (Eds ။ ), ပူးတွဲမှုနှင့်လိင် (စစ။ 51-78) ၌တည်၏။ နယူးယောက်, နယူးယော့: Analytic Press ။ Google Scholar
Morrison, အေပီ (2008) ။ အဆိုပါလေ့လာဆန်းစစ်ရဲ့အရှက်ကွဲခြင်း။ ခေတ်ပြိုင် Psychoanalysis, 44 (1), 65-82 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00107530.2008.10745951 Crossref, Google Scholar
Nesi, ဂျေ, & Prinstein, အမ်ဂျေ (2018) ။ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများရှာဖွေခြင်း - ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင့်အတန်းရှာဖွေမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ။ လက်တွေ့ကလေး & ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ ၁-၉ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/15374416.2018.1437733 Crossref, Google Scholar
O'Sullivan က, အယ်လ်အက်ဖ်, & Thompson က, အေအီး (2014) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လိင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပညာ၏ APA လက်စွဲစာအုပ် A. အယ်လ် Tolman, အယ်လ်အမ်စိန်, ဂျေအေ Bauermeister, ဒဗလျူအိပ်ချ်ဂျော့ခ်ျ, ဂျေဂျီ Pfaus, & အယ်လ်အမ်ရပ်ကွက် (Eds ။ ) ၌တည်၏။ 1: လူ -based ချဉ်းကပ်မှု (စစ။ 433-486) ​​။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း။ Crossref, Google Scholar
Pharr, ဂျေ, Enejoh, V. , Mavegam, ခ O. , Olutola, အေ, & Karick, အိပ်ချ်, & Ezeanolue, အီးအီး (2015) ။ ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုနေရာနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားဆယ်ကျော်သက်များအကြားအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများအကြားဆက်ဆံရေး အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်လက်တွေ့သုတေသနဂျာနယ်, 6, 471. doi:https://doi.org/10.4172/2155-6113.1000471 Google Scholar
Pinto, ဂျေ, Carvalho, ဂျေ, & Nobre, P. ဂျေ (2013) ။ အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် FFM ၏စရိုက်လက္ခဏာများ၊ ပြည်နယ်စိတ်ပညာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှု။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 10 (7), 1773-1782 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/jsm.12185 Crossref, Google Scholar
Reid, R. C. (2010) ။ hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုအတွက်နမူနာယောက်ျားအတွက်စိတ်ခံစားမှုကွဲပြားခြားနားမှု။ အဆိုပါစွဲအတွက်လူမှုရေးအလုပ်အလေ့အကျင့်၏ဂျာနယ်, 10 (2), 197-213 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/15332561003769369 Crossref, Google Scholar
Reid, R. C. (2013) ။ hypersexual ရောဂါအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်များ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၂၀ (၁-၂)၊ ၄-၁၈ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2013.772876 Google Scholar
ရိဒ်, R. C. , လက်သမား, ခ N. , Spackman, အမ်, & ဝီလ်, L. အယ်လ် (2008) ။ hypersexual အပြုအမူအတွက်အကူအညီတောင်းလူနာများအတွက် Alexithymia, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖိအားမှအားနည်းချက်။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 34 (2), 133-149 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926230701636197 Crossref, Google Scholar
ရိဒ်, R. C. , Garos, အက်စ်, & လက်သမား, ခ N. (2011) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုအမျိုးသားများ၏အပြင်လူနာနမူနာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လိင်စွဲ & မငြိမ်မသက်, 18 (1), 30-51 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2011.555709 Crossref, Google Scholar
ရိဒ်, R. C. , Stein, ဂျေအေ, & လက်သမား, ခ N. (2011) ။ hypersexual ယောက်ျား၏လူနာနမူနာအတွက်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့် neuroticism ၏အခန်းကဏ္ကိုနားလည်ခြင်း။ အာရုံကြောနှင့်စိတ်ရောဂါ၏ဂျာနယ်, 199 (4), 263-263 ။ Doi:https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3182125b96 Crossref, Medline, Google Scholar
Rettenberger, အမ်, Klein, V. , & Briken, P. (2016) ။ hypersexual အပြုအမူ, လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအကြားဆက်ဆံရေး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 45 ​​(1), 219-233 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0399-7 Crossref, Google Scholar
Rotter, ဂျေခ (1966) ။ အားဖြည့်ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြည်ပမှအတွင်းပိုင်းအတွက်ယေဘူယျမျှော်မှန်းချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Monographs, 80 (1), 1-28 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/h0092976 Crossref, Google Scholar
စယ်, D. , Peplau, အယ်လ်အေ, & Cutrona, C. အီး (1980) ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော UCLA အထီးကျန်နှုန်း - တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုခိုင်လုံသောအထောက်အထား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 39 (3), 472-480 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.3.472 Crossref, Medline, Google Scholar
Ševčíková, အေ, Blinka, L. , & Daneback, K. (2018) ။ ချက်စကားပြောသောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခန့်မှန်းသူအဖြစ်ဆက်စ်တင်ခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်, 15 (4), 426-437 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1295842 Crossref, Google Scholar
Ševčíková, အေ, Vazsonyi, အေတီ, Širůček, ဂျေ, & Konečný, Š။ (2013) ။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပြုအမူများကိုခန့်မှန်းသူများ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်, 16 (8), 618-622 ။ Doi:https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0552 Crossref, Google Scholar
စိန့်လောရင့်, ဂျေအက်စ် (1993) ။ အာဖရိက - အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများ၊ လိင်အပြုအမူနှင့်သန္ဓေတားနည်းများဆုံးဖြတ်ချက် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 61, 104-112 ။ Crossref, Google Scholar
Smith ကအီး R. , Murphy က, ဂျေ, & Coats, အက်စ် (1999) ။ အုပ်စုများမှပူးတွဲမှု: သီအိုရီနှင့်တိုင်းတာခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 77 (1), 94-110 ။ Doi:https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.1.94 Crossref, Google Scholar
Stolorow, R. D. (1994) ။ သဘာဝနှင့် psychoanalytic အနက်၏ကုထုံးအရေးယူ။ R. St Stolorow, G. အအီး Atwood, & ခ Brandchaft (Eds ။ ), အဆိုပါ intersubjective ရှုထောင့် (စစ။ 43-55) ၌တည်၏။ Northvale, NJ: Jason Aronson ။ Google Scholar
Stolorow, R. D. (2002) ။ drive ကိုကနေထိခိုက်စေဖို့။ Psychoanalytic စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, 22 (5), 678-685 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/07351692209349012 Crossref, Google Scholar
ဝေါ်လ်တန်, အမ်တီ, Cantor, ဂျေအမ်, & Lykins, အေ ((2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင် variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 46 (3), 721-733 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-015-0606-1 Crossref, Google Scholar
ဝမ်, ဂျေအမ်, Hartl, အေစီ, Laursen, ခ, & Rubin က, K. အိပ်ချ် (2017) ။ အနိမ့်သဘောညီညွတ်မှု၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်: အနိမ့်သဘောတူအမေရိကန်နှင့်တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ငြင်းပယ် sensitivity ကို၏လူ့အကျိုးဆက်များပိုမိုဆိုးရွားစေ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်သုတေသနဂျာနယ်, 67, 36-43 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.02.005 Crossref, Google Scholar
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO [WHO က] ။ (2018) ။ ICD-11 (သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါစာရင်းဇယား) ။ 6C72 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ။ မှရယူရန် https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1630268048 Google Scholar
Yoder, V. C. , Virden, T. ခ, & Amin, K. (2005) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်အထီးကျန်မှု - အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလား။ လိင်စွဲ & မငြိမ်မသက်, 12 (1), 19-44 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160590933653 Crossref, Google Scholar
Zapf, ဂျေအယ်လ်, Greiner, ဂျေ, & ကာရိုး, ဂျေ (2008) ။ ချိတ်ဆက်စတိုင်များနှင့်အထီးလိင်စွဲ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၅ (၂)၊ ၁၅၈-၁၇၅ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160802035832 Crossref, Google Scholar
Zilberman, N. , Yadid, G. အ, Efrati, Y. , Neumark, Y. , & Rassovsky, Y. , (2018) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး profile များကို။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 82, 174-181 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.03.007 Crossref, Google Scholar